Bit By Bit - Mass mmekota - 5.5.4 Kwado na anya
Ugbu a na i nwere heterogeneous ndị arụ ọrụ ọnụ na a bara uru na nkà mmụta sayensị nsogbu, na i nwere mmasị ha lekwasịrị anya ebe ọ pụrụ ịbụ ihe bara ezigbo, jide n'aka na ahapụ ụlọ maka ha ka ha iju gị anya. Ọ bụ mara mma na nwa amaala ọkà mmụta sayensị kpọrọ ụyọkọ kpakpando na Galaxy Zoo na apịaji na-edozi na Foldit. Ma, n'ezie, nke ahụ bụ ihe ndị a oru ngo e mere iji nyere. Gịnị bụ ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya, m na uche, bụ nke na ógbè ndị a na-emepụta ọkà mmụta sayensị na ndị unanticipated ọbụna ha creators. Dị ka ihe atụ, ndị Galaxy Zoo obodo emewo chọpụtara na a ọhụrụ na klas nke nkà mmụta mbara igwe ihe na ha na-akpọ "Green peas."
Nnọọ n'isi Galaxy Zoo oru ngo, mmadụ ole na ole chọpụtara ihe ọhụrụ green ihe, ma mmasị n'ebe ha crystallized mgbe Hanny Von Arkel, a Dutch nkụzi ụlọ akwụkwọ, malitere a anụnụ na Galaxy Zoo ụka forum na catchy aha: "Nye peas a chance. "The anụnụ, nke malitere August 12, 2007, malitere na njakịrị:" ị na-achịkọta ha maka nri abalị? "," peas kwụsị ", na na. Ma, mara mma n'oge na-adịghị ọzọ Zooites malitere agha chee ha peas. N'ime oge ahụ posts bịara ọzọ oru na zuru ezu ruo mgbe posts dị ka nke a malitere igosi na: "The OIII akara (na 'agwa' akara, na 5007 angstrom) na ị na-esonụ ebiliri ibe kwupụta red dị ka z abawanye na kpamkpam n'ime n'okpuru-red na banyere z = 0.5, ie-apụghị ịhụ anya " (Nielsen 2012) .
N'ime oge ahụ Zooites ji nwayọọ nwayọọ na-aghọta na systematizing ha kwuru nke peas. N'ikpeazụ, na July 8, 2008-ihe fọrọ nke nta a zuru afọ mgbe e mesịrị-Carolin Cardamone, ihe astronomy gụsịrị akwụkwọ akwụkwọ na Yale na so na Galaxy Zoo otu, sonyeere na eri na-enyere hazie ndị "agwa Hunt." More ịnụ ọkụ n'obi na-arụ ọrụ ahụ kpatara na site July 9, 2009 a akwụkwọ e bipụtara na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society na aha ahụ bụ "Galaxy Zoo Green peas: Discovery nke a Klas nke kọmpat Kemgwucha Star-akpụ Ụyọkọ" (Cardamone et al. 2009) . Ma, ndị nwere mmasị na peas bụghị naanị n'ebe. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha anọwo na isiokwu nke mekwuo nnyocha site enyocha mbara igwe gburugburu ụwa (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Mgbe ahụ, na 2016, ihe na-erughị afọ 10 mgbe mbụ post site a Zooite, a akwụkwọ e bipụtara na Nature chọrọ Green peas dị ka a kwere omume nkowa maka otu ihe dị mkpa na mgbagwoju anya ụkpụrụ na ionization nke eluigwe na ala. Ọ dịghị onye n'ime ihe nke a mgbe ekere mgbe Kevin Schawinski na Chris Lintott mbụ tụlere Galaxy Zoo na a ụlọ mmanya na Oxford. Ọ dabara nke ọma, Galaxy Zoo nyeere ndị a iche iche na-atụghị anya ịtụnanya nanị site ikwe sonyere na-ekwurịta okwu ọ bụla ọzọ.